octobre 2016 – filazantsaramada
Archives Mensuelles:octobre 2016
ASAN’NY FANAHY MASINA
« Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy. » Filipiana 1:6 Tsy misy tsara na iray aza, « fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » hoy ny Romana 3:23. Fa nateraky ny nofo isika ka nofo ihany; ary nandova ota. Teo […]
Posted byfilazantsaramada octobre 28, 2016 octobre 28, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on ASAN’NY FANAHY MASINA
Fanolorana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy sahirana tao amin’ny CEG Mananjary. Nandritry ny nanatanterahana ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala, ny 06-07 Oktobra 2016 teo dia nohararaotin’Atoa Andriamanjaka Daniel Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny mpiara-miasa aminy ny nihaona tamin’ny Raiamandreny Pastora Ranaivosolo Jaona, Mpitondra Fileovana Mananjary. Ny […]
Posted byfilazantsaramada octobre 26, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on Programan’asa Fanasoavana
« Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy, ka dia lasa nody. » Jaona 4:50 Jesosy nizaha ny toetran’ny finoan’ity tandapa. Nanatona an’i Jesosy tao Kana any Galilia izy rehefa reny fa tonga tao Jesosy. Kana, ilay toerana nanaovany fahagagàna voalohany, nanovàny ny rano ho divay tao […]
Posted byfilazantsaramada octobre 21, 2016 octobre 20, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on VELON’NY FINOANA
Fandefasana horonan-tsarimihetsika an-kalamanjana
Samy nahazo ny anjarany ny sarangan’olona rehetra. Miezaka mitady hatrany ny fomba rehetra hitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ ireo mbola any ivelan’ny Fiangonana ny Feon’ny Filazantsara (FF). Nahararaotina noho izany ny fotoana nanatanterahana fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Antsenavolo, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra nandefasana horonan-tsarimihetsika an-kalamanjana. Ny harivan’ny 06 Oktobra 2016 […]
Posted byfilazantsaramada octobre 19, 2016 novembre 3, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on Fandefasana horonan-tsarimihetsika an-kalamanjana
MITONDRA TENA TSARA
Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Efesiana 5:15-17 – Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny […]
Posted byfilazantsaramada octobre 14, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on MITONDRA TENA TSARA
Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tontosa soa aman-tsara tany amin’ny (FLM) Fitandremana Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra 2016 lasa teo ny Seminera “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fitandremana Antsenavolo. Mpandray anjara miisa 22 avy amin’ny Fiangonana roa ambinin’ny folo ao anatin’ny Fitandremana Antsenavolo no nisitraka feno izany […]
Posted byfilazantsaramada octobre 14, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
« Matokia anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b Teny nataon’i Jesosy tamin’ilay mararin’ny paralisisa. Ny fandikantsika olombelona ny lalàna no mahatonga antsika hahazo fanamelohana. Ary ny fahotantsika no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. » (Isaia 44:22) Andriamanitra no mandray andraikitra mamela heloka sy […]
Posted byfilazantsaramada octobre 7, 2016 octobre 3, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on NY FAMELAN-KELOKA
Mahatoky amin’ny asany ny mino Ny Kristiana tsirairay dia natao hitory ny Filazantsara amin’ny olona rehetra, miainga ao amin’ny ankohonany izany. Koa dia ilaina ny mitombo amin’ny finoana mba ho tena Kristiana mahatoky amin’ny asa izay niantsoana sy nanendren’ny tompo azy. Noho izany dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara Ramatoa Rabedasy Herivao Bodolalaina, Mpitandrina ny FJKM […]
Posted byfilazantsaramada octobre 3, 2016 octobre 3, 2016 Posted inUncategorizedLeave a comment on Famangiana Fiangonana